Professional Wordpress Website တစ်ခုကို သင်ကိုယ်တိုင် ရေးဆွဲလာနိုင်ရုံမက Wordpress Website ရေးသားနည်းသင်တန်းကိုပါ သင်ကိုယ်တိုင် ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပို့ချလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
SQL Database အကြောင်းကို အခြေခံကနေ လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ြပီး Relational Database Management သဘောတရားများ RDBMS Database type အမျိုးအစားများ စသည့်အကြောင်းအရားများကို လက်တွေ့သင်ခန်းစာများနှင့်သင်ယူရမည်ြဖစ်သည်။
Java Programming SE Fundamental နည်းပညာများကို အခြေခံမှစပြီး ကိုယ်တိုင်လေ့လာနိုင်ပါမည်။
Unit 1: Getting Started Java
Unit 2: Variable, Data Type & Operator
Unit 3: Control Structure
Unit 5: Array
Unit 6: Character & String
Unit 7: Class, Object & Method
Unit 9: File & Folder
Unit 10: Graphical User Interface (GUI)
Unit 11: Calculator Project
Java Programming ဘာသာ၇ပ်ကို အခြေခံမှစပြီး လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သည်အထိ တဆင့်ချင်းရှင်းပြထားပါသည်။
HTML,CSS,Java script,Bootstrap အစရှိသည်တို့ပါ၀င်ပါသည်။
အိမ်သုံး ကျောင်းသုံး ရုံးသုံး စျေးဆိုင်သုံး စသည့်အသေးစားလုပ်ငန်းများမှစကာ အကြီးစားလုပ်ငန်းများ ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းများ စားရင်းကိုင်များ ဘွဲ့လွန် သင်တန်းသားများ သုတေသီများ တက္ကသိုလ်ဆရာ ဆရာမများ လက်စွဲဆောင်ထားရမည့်စာအုပ်ြဖစ်သည်။
Electronic Support အထောက်အကူပြုအီလက်ထရောနစ်
Networking မှာ မရှိမဖြစ် Server (၁၀) မျိုး အကြောင်းကို မြန်မာလို Step By Step သင်ကြားပို့ချထားတဲ့ ဗွီဒီယို Training ခွေကို AIT Computer ကနေ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗွီဒီယိုဖိုင် (၄၀၀) ကျော်ပါဝင်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် System Engineering ဘာသာရပ်ကို တစ်ဝကြီး လေ့လာသင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ လေ့ကျင့်ဖို့ ကိုယ်ပိုင် Lab တစ်ခု တည်ဆောက်တာက အစ သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။
Microsoft Exam တွေဖြေဆိုဖို့ အများကြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာ သေချာပါတယ်။
Windows Server 2012, 2008, 2003 တို့ကို အခြေခံပြီး သင်ကြားပို့ချထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယား က Brandman University နဲ့ ဝါရှင်တန်ဒီစီ က Saylor Academy တို့ရဲ့ Computer Science ဘာသာရပ် (၂၀) ကို ဂုဏ်ထူးမှတ်နဲ့ Online ကနေအောင်မြင်ထားတဲ့ ကိုဝေဖြိုးအောင် (AIT Computer) ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဝေဖြိုးအောင် (AIT Computer) ဟာ ဆိုရင် မြန်မာလို အိုင်တီနည်းပညာ ပို့ချချက် ဗွီဒီယိုဖိုင် တစ်သောင်းကျော်နဲ့ နည်းပညာစာအုပ် တစ်ရာကျော် ရေးသားထုတ်ဝေဖြန့်ချိထားပြီး အိုင်စီတီနည်းပညာများ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ ပြန့်ပွားအောင် ဆောင်ရွက်နေသူတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft Company ရဲ့ CSR Program တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tech Age Girl Program မှာလည်း AIT Computer ရဲ့ E-Learning Product တွေကို Syllabus အဖြစ် အသုံးပြု သင်ကြားပို့ချလျှက် ရှိပါတယ်။
Google Form ->
https://goo.gl/forms/hUFyMzTMmQFXxSmy1 မှာ နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ Gmail တို့ကို ဖြည့်ပြီး Submit နှိပ်ပါ။ ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခု Post က ပုံပေါ် တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ Facebook Form မှာ နာမည်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ Gmail တို့ကို ဖြည့်ပြီး Submit နှိပ်ပါ။ ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေချေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့လာရမည့် သင်ခန်းစာ ဘာသာရပ်တွေက ဘာလဲ?
ADDC Server, DHCP Server, DNS Server, NAT Gateway Server, ICS Gateway Server, File Server, Web Server, VPN Server, ISA Server, RIS Server တို့ရဲ့ အသုံးပြုရခြင်းအကြောင်းကို လေ့လာကြပါမည်။
လူကိုယ်တိုင် တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူလိုသူများအနေဖြင့် AIT Computer Co.,Ltd. ရဲ့ Delivery Partner ဖြစ်တဲ့ Excellent Software ဆိုင်များတွင် တန်ဖိုးငွေ တစ်သောင်းခွဲကျပ်ဖြင့် အလွယ်တကူ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ။
🛒 ဆိုင်အမှတ်(၁) >> Excellent ဆိုင်၊ အမှတ်(၁၀၉)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းကြား
📞 09 2500 25755
🛒 ဆိုင်အမှတ်(၂) >> Excellent ဆိုင်၊ လှည်းတန်း၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ စံရိပ်ငြိမ် ၂ လမ်း x ၃ လမ်းကြား၊ IT Food Center နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊
📞 09 2531 05527
🛒 ဆိုင်အမှတ်(၁) >> Excellent ဆိုင်၊ ၇၃ လမ်း၊ ၂၆ လမ်း x ၂၇ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။
📞 09 2501 20118
ဆက်လက်ပြီး Computer Science ဘာသာရပ် မြန်မာလို ပို့ချချက်ခွေများကို တစ်လလျှင် ဘာသာရပ်တစ်ခုကို ပုံမှန် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်။
CCNA Routing & Switching Lab Manual
Web Development Part3(PHP & MySQL)
Web Developing နည်းပညာဘာသာရပ်မှာ Open Source တစ်ခုဖြစ်တဲ့ PHP ဘာသာရပ်ကို MySQL Database နဲ့ တွဲဖတ်ပြီး လက်တွေ့လေ့လာသင်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Programming Language ဘာသာရပ်ရဲ့ အခြေခံ အကြောင်းအရာများဖြစ်တဲ့ Variable, DataType, String, Array, Conditional Logic, Looping, Function, OOP စတဲ့ သင်ခန်းစာများကိုလည်း လက်တွေ့ Project များ ပြုလုပ်ရင်း လေ့ကျင့် သင်ယူ သွားရပါမည်။
Final Pratical Project များ လက်တွေ့ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို မြန်မာလို သင်ကြားပို့ချထားသော e-Learning Training Video ပေါင်း (၁၀၀) ကျော် ပါဝင်ပါသည်။ Step By Step တစ်ဆင့်ချင်းစီ သင်ကြားပေးတာဖြစ်လို့ မိမိဖာသာ လိုက်လံ လုပ်ဆောင်ရင် နာမည်ကျော် PHP ဘာသာရပ်ကို အိုးမကွာ အိမ်မကွာ မိမိနေထိုင်ရာ နေရာကနေ အလွယ်တကူ သင်ယူလေ့လာလို့ ရနေပါပြီ။
မှာယူလိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ပါ Form မှာ အမည်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ပစ္စည်းလက်ခံမည့် နေရပ်လိပ်စာ များ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
အိမ်တိုင်ရာရောက် လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ခအနေနဲ့ (၁၅၀၀) ကျပ်သာ ကျသင့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Training DVD ခွေဖိုးက ၁၅,၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်လို့ အားလုံးပေါင်းမှ ၁၆,၅၀၀ ကျပ်သာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၆,၅၀၀ ကျပ်ထဲနဲ့ နာမည်ကျော် PHP & MySQL ဘာသာရပ်ကို ခုချက်ချင်းပဲ မှာယူပြီး အမြန်ဆုံး သင်ယူလိုက်ပါ။ တစ်နေ့ (၈) နာရီနှုန်းနဲ့ လေ့လာသင်ယူလိုက်ရင် တစ်ပတ်အတွင်း ဒီနည်းပညာကို သဘောပေါက် နားလည်ပြီး သင်ကိုယ်တိုင် Dynamic Website တစ်ခုကို ရေးဆွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Web Environment Server Setup များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ Programming နှင့် Database အခြေခံများမှပင် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Web Development Series Part3(PHP & MySQL) ကို လေ့လာသင်ယူပြီးပါက
Frontend, Backend အပြည့်အစုံပါဝင်ပြီး အမှန်တကယ် Control လုပ်လို့ ရနိုင်တဲ့ ကိုယ်ပိုင် CMS Dynamic Website တစ်ခုကို အချိန်တို ရက်ပိုင်းအတွင်း ရေးဆွဲသွားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ရေးဆွဲနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ Software Installor များ၊ Tools များ၊ Content Data များ၊ PowerPoint ဖိုင်များကိုလည်း တစ်စုတစ်စည်းတည်း ထည့်သွင်းပေးထားလို့ PHP & MySQL သင်တန်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလိုသူများအတွက်လည်း အဆင်ပြေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Adobe Company က ထုတ်လုပ်တဲ့ တရားဝင်သင်ရိုး PhotoShop CS5 ကို ‌‌အောက်ပါ သင်ခန်းစာများနဲ့ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။
Unit 1	Getting to Know Working Area
Unit 2	Basic Photo Corrections
Unit 3	Working with Selections
Unit 4	Layer Basics
Unit 5	Correcting & Enhancing Digital Photographs
Unit 6	Mask & Channel
Unit 7	Typographic Design
Unit 8	Vector Drawing Techniques
Unit 9	Advanced Layering
Unit 10	Advanced Compositing
Unit 11	Painting with the Mixer Brush
Unit 12	Working with 3D Images
Unit 13	Preparing File for the Web
Unit 14 Producing & Printing Consistent Color
ဗွီဒီယိုဖိုင် (၁၃၀) ‌ေကျော်််််နဲ့ သင်ခန်းစာ Lesson File များလည်း တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပ‌ေးထားပါတယ်။
နိုင်ငံသားတစ်ယောက်မှာ မသိမဖြစ် သိထားရမည့် ICT Skill များကို နိုင်ငံတကာ သက်မှတ်ထားသည့် စံချိန်စံနှုန်းများအတိုင်း မြန်မာလို သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။ e-Government, e-Commerce, e-Business စတဲ့ Digital Revolution အတွက် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း မဖြစ်မနေ သင်ယူတက်မြောက်ထားရမည့် ICT နည်းပညာ အခြေခံများကို Step By Step သင်ယူလေ့လာရပါမည်။ အင်တာနက်ကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချပြီး ဘဝအောင်မြင်အောင်၊ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် နည်းလမ်းများကို မြန်မာဗွီဒီယိုဖိုင် (၂၅၀) ကျော်နဲ့ အားပါးတရ လေ့လာသင်ယူရပါမည်။ DVD (၂) ချပ်တွဲ ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးငွေ (၁၅,၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပါတယ်။
🎯 လေ့လာသင်ယူရမည့် ဘာသာရပ်များ
Unit 1 Introduction to ICT & Internet
Unit2The Web Browser
Unit3Using the Web
Unit4Email & Internet
Unit5Web Based Office & Online Collaboration
Unit6Online Data Storage
Unit7Online Activity
Unit 8 Online Survey Form
Unit9Facebook Group, Page & Security
Unit 10 Internet Revolution
Unit 11 Internet Communication
Unit 12 Cyber Security
ပါဝင်တဲ့ မြန်မာဗွီဒီယိုဖိုင် List အသေးစိတ်ကို အောက်ပါ Link မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Link -> https://www.facebook.com/notes/ait-computer/ict-foundation-course/1618651498257856/
မှာယူလိုသူများ အောက်ပါ Form ကို ဖြည့်ပြီး Comment မှာ မှာယူပြီးပါပြီလို့ ရေးပေးပါ။
Link -> https://goo.gl/forms/53leDQGZPozpIDRh2
ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေရှင်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
# ဆိုင်အမှတ်(၁) >> Excellent ဆိုင်၊ အမှတ်(၁၀၉)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ ၃၈ လမ်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းသာ လမ်းကြား
ဖုန်း - 09 2500 25755
# ဆိုင်အမှတ်(၂) >> Excellent ဆိုင်၊ လှည်းတန်း၊ အင်းစိန်လမ်းမ၊ စံရိပ်ငြိမ် ၂ လမ်း x ၃ လမ်းကြား၊ IT Food Center နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊
ဖုန်း 09 2531 05527
# ဆိုင်အမှတ်(၁) >> Excellent ဆိုင်၊ ၇၃ လမ်း၊ ၂၆ လမ်း x ၂၇ လမ်းကြား၊
ဖုန်း 09 2501 20118
ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကို စိတ်၀င်စားသူ လူငယ်တွေအတွက် လူငယ်စာရေးဆရာ "ခေတ်မင်းညို" ရဲ့ ဒုတိယမြောက်စာအုပ်ြဖစ်ပါတယ်။
Professional Wordpress CMS
ဝေဖြိုးအောင် (AIT Computer) ကိုယ်တိုင် Wordpress CMS ဘာသာရပ်ကို အခြေခံကနေ အဆင့်မြင့်ထိ Step By Step သင်ကြားပို့ချထားပါတယ်။ Wordpress သင်ကြားရေး ဗွီဒီယိုဖိုင် (၁၅၀) ကျော် ပါဝင်ပြီး လိုအပ်တဲ့ Software Setup, Lesson File, Database File, Content Asset (Image, Text, Data), Powerpoint PDF, Sample Project များလည်း တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းထားတဲ့ All in One - One Stop Service ဖြစ်ပါတယ်။ စာအုပ်နဲ့ Training DVD အတွက် (၁၅,၀၀၀) ကျပ်သာ ကုန်ကျမှာဖြစ်ပြီး အိမ်တိုင်ရာရောက် ပစ္စည်းရောက်မှ ငွေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီး Delivery Service ပို့ဆောင်ခ Free ဖြစ်ပါတယ်။
Professional Wordpress Course Book & DVD မှာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ သင်ခန်းစာ Outline ကတော့
Unit 1	Introduction to Wordpress
Unit 2	CreatingaWordpress Website
Unit 3	Getting Started Wordpress Website
Unit 4	Creating Posts
Unit 5	Creating Web Pages
Unit 6	Theme Installation And Configuration
Unit 7	CreatingaMenu
Unit 8	Comments And Discussions
Unit 9	Creating Contact Form
Unit 10	Web Design Theory
Unit 11	Administering User Account
Unit 12	Configuring Wordpress Setting
Unit 13	Plugins And Widgets
Unit 14	Images And Videos
Unit 15	Social Network Communication
Unit 16	Website Backup And Maintenance
Unit 17	cPanel Configuration
Unit 18	Email Communication System
Unit 19	Managing Updates, Security and Speed
တို့ဖြစ်ပြီး တစ်ခန်းချင်းဆီမှာ ပါဝင်တဲ့ သင်ခန်းစာ အသေးစိတ် Detail ကို အောက်ပါ Link မှာ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စာအုပ်နဲ့ Training DVD မှာယူလိုသူများ အောက်ပါ Form Link မှာ လိုအပ်တဲ့ Data များ ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
ဓါတ်ပုံများကို ပိုမိုထူးခြားလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
ဓါတ်ပုံများ၏ နောက်ခံအသံအဖြစ် သီချင်းသံများကို ဘယ်လိုထည့်သွင်းသလဲ
အခွေအတွက် Cover Sticker ကို ဘယ်လိုလုပ်သလဲ
.............ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Arcsoft ShowBiz DVD ရဲ့အသုံး၀င်ပုံများ
CCNP Routing အပိုင်း(၁) OSPF မှတ်စု
ဤစာအုပ်တွင် OSPF ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့်OSPF သုံးသင့်သလဲ? OSPF ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? အစရှိသည်ဖြင့် OSPF နှင့်ပတ်သတ်၍ စုံစုံလင်လင်ပါရှိပါသည်။
Fundamental Windows & Linux Command line
ဤစာအုပ်သည် Windows & Linux နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် အလွန်ထူးခြားသော စာအုပ်ြဖစ်ပါသည်။ Windows , Linux နှစ်မျိုးလုံးကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်လေ့လာသင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ြဖစ်ပါသည်။
CCNA Security Part I
ICT သုံးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ Senior Management မှာပါ၀င်နေတဲ့သူတိုင်း
Security Professional ဖြစ်ချင်သူတိုင်း
Network Security ကို စိတ်၀င်စားသူတိုင်း
CCNA Security စာမေးပွဲဖြေလိုသူတိုင်းအတွက်
Google Sketchup Pro2015
အခုဒီစာအုပ်မှာ Google Sketchup Pro 2015 အကြောင်းကို ဗိသုကာအင်ဂျင်နီယာ ရူထောင့်ကနေ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ တင်ပြထားပါတယ်..
သည်စာအုပ်လေးထဲမှာ မိုးတိမ်တိုက်တွေကို ဖန်တီးခြင်း ၊ မီးတောက်မီးလျှံတွေကို ဖန်တီးခြင်း ၊ ရေပြင်နဲ့ အခိုးအ​ေငွတွေကို ဖန်တီးခြင်း မိုးရေစက်တွေကို ဖန်တီးခြင်း လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဖန်တီးခြင်းများအပြင် အခြားသော ဒီဇိုင်းနည်းပညာရပ်များကိုလည်းတင်ပြပေးထားပါသည်။
ဒီစာအုပ်မှာ Photoshop နဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ပြုပြင်တဲ့အခါ ပြုလုပ်ရတာ လွယ်ကူပြီး ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ နည်းစနစ်လေးတွေကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒီစာအုပ်မှာပါတဲ့ သင်ခန်းစာတိုင်းဟာ လက်တွေ့ပြုလုပ်နိုင်ပြီး တကယ်အသုံး၀င်တဲ့ လျှို့ဝှက်နည်းလေးတွေကို ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Networking Blogs Collection
CCIE Certificate အကြောင်း တစေ့တစောင်း
CCIE Bootcamp တက်မယ်ဆိုရင်
၁၉ နှစ်သား CCIE
CCIE ကောက်နုတ်ချက်များ အပိုင်း − ၂ DMVPN and MPLS မှတ်စု
ဒီစာအုပ်လေးမှာ ရေးသားပုံအစီအစဉ်အနေနဲ့ကတော့ သီအိုရီကို အရင်ဆုံးနားလည်အောင်ဆွေးနွေးထားပါတယ်။သီအိုရီနားလည်သွားတဲ့အခါ လက်တွေ့ဘယ်လိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာ အဆင့်ဆင့်လုပ်ပြထားပါတယ်။ (အမှာစာမှကောက်နုတ်ချက်)
CCIE ကောက်နုတ်ချက်များ အပိုင်း−၁ BGP မှတ်စု
ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာ BGP ကို လေ့လာရာမှာ အဓိကသိထားရမည့် အကြောင်းအရာတွေကို အခြေခံကစပြီးတော့BGP ရဲ့လုပ်ဆောင်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို သီအိုရီသာမက လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများ ၊ အသုံးပြုရမည့် နေရာများနှင့် နမူနာများကို စုံစုံလင်လင်နဲ့ တစုတစည်းထဲ စုပေါင်းရေ:သားပေးထားတဲ့ မှတ်စုစာအုပ်ြဖစ်ပါတယ်။ (အမှာစာမှကောက်နုတ်ချက်)
Cisco Essential Networking Note
Network Professional များအတွက် မရှိမဖြစ်လက်ကိုင်ထားရမည့် စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ြဖစ်ပါသည်။